ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည် ရောဂါတို့၏ အရင်းအမြစ် ဖြစ်လေသလော ကြည်လွင်မြင့် (မုဒြာ) ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည် အခြေအမြစ် တည်၍ ဖြစ်ရသော ရောဂါမျိုးတို့...
မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁-၃-၂၀၁၉) - Download Links MediaFire Scribd Myawady Daily 1-3-2019 by on Scribd
မန္တလေးတက္ကသိုလ် အကြိမ်(၅၀)မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
မန္တလေး ၊ ၁၇-၁၂-၂၀၁၃ မန္တလေး တက္ကသိုလ် အကြိမ် (၅၀)မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကို လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်နေ့ အ...
သမိုင်းဝင် စောလူးမင်းကျောက်စာ အကြောင်း စာတမ်းဖတ်ပွဲကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ချီကာဂိုမြို့တွင် ပြုလုပ်မည်
မြစ်သား ၊ ၂၆-၃-၂၀၁၅ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မြစ်သားမြို့ ပေတောကျောင်းတိုက် ရှိ နောက်တွေ့ ကျောက်စာအသစ် ဖြစ်သော စောလူးမင်း ကျောက်စာ နှင...
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၀)၊ အမှတ် (၄၆) Download Links MediaFire Scribd 8-6-2017 Moe Thout Pan by TheMyawadyDaily on Sc...
- ရန်ကုန်၊ လူမှုရေး ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုဒေသရှိ ပေပေါင်း ၁၂ဝဝဝ နီးပါးမြင့်သော ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်ကာ ...
http://myawady-myawady.blogspot.com/ . . . http://facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/themaywadydaily